Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Geesigii ugu dambeeyay ee Dalxiiska ayaa ka dhiga Senegal mid ku faanta
Guddiga Dalxiiska Afrika • Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Senegal • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Abaalmarinta Geesiyaasha Dalxiiska waxaa bilaabay Shabakadda Dalxiiska Adduunka, oo ah shabakad xirfadlayaal dalxiis ku leh 128 dal. WTN waxay billowday dib -u -dhiska.socod bishii Maarso ee 2020 magaalada Berlin, Jarmalka.
Abaalmarinta kuma salaysna khidmadaha xayaysiinta. Had iyo jeer waa lacag la'aan waana inay aqoonsataa dadka u tallaabsada dheeraadka ah wanaagga Warshadaha Dalxiiska Adduunka, Dr. Deme Mouhamed Faouzou hadda waa mid iyaga ka mid ah, iyo Geesigii Dalxiiska ee ugu horreeyay ee ka yimid Galbeedka Afrika.
Mr. Deme Mouhamed Faouzou waa la -taliyaha Wasaaradda Dalxiiska iyo Gaadiidka Cirka ee Senegal, haddana waa kii ugu dambeeyay Geesi Dalxiis by Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
Hoolka Geesiyaasha Dalxiiska Caalamiga ah wuxuu ku furan yahay magacaabis kaliya si loo aqoonsado kuwa muujiyey hoggaan aan caadi ahayn, hal -abuurnimo, iyo ficillo. Geesiyaasha Dalxiiska ayaa qaada talaabada dheeraadka ah. Ma jiraan wax khidmad ah mar walba.
Wuxuu yiri: Waan fahamsanahay ahmiyadda iyo culeyska mudnaantaan oo loo aaneynayo shaqsiyaadka waaweyn ee dalxiiska adduunka waxaanan jeclaan lahaa inaan xaqiijiyo taageeradayda anigoo labanlaabaya dadaallada tirada iyo tayada ee soo nooleynta dalxiiska Afrika kadib COVID-19.
Mr. Deme Mouhamed Faouzou waxaa u magacaabay Josef Kafunda oo ku sugan Namibia iyo kuwo kale si uu u noqdo Geesigii Dalxiiska ee ugu dambeeyay Shabakada Dalxiiska Adduunka.
Waa abaalmarintii ugu horreysay ee Senegal, 9 -aad ee Afrika, iyo 25 -aad adduunka oo dhan, iyo geesiga 4 -aad ee sanadkan (2021) adduunka oo dhan.
Wuxuu yiri: waan dhaqaaqay, haa!
Soo jeedinta Mudane Joseph Kafunda oo ka socda Namibia, jilaa weyn iyo xirfadle dalxiis ayaa si naxariis leh u kafaala qaaday astaanteyda xulashada musharraxiinta darajada Geesiyaasha Dalxiiska.
Ii oggolow inaan siiyo abaalmarin iyo inaan u mahadceliyo guddiga xulashada ee aad hoggaamiso inaad wax baratay oo aad aqbashay inaad i siiso cinwaanka sharafta leh ee Geesiga Dalxiiska.
Ballankan ayaa imanaya hal sano oo keliya ka dib markii guddida fulinta ee dalxiiska Afrika ay i maamuustay inaan kor u qaado darajada Safiirka Dalxiiska Afrika.
Quduusyadaan, waxaan ku dhiiraneynaa inaan dhahno, waa midhihii 30 sano oo waayo -aragnimo iyo shaqo adag ah si aan gacan yar uga geysanno horumarinta dalxiiska Afrika, adduunka oo dhan iyo gaar ahaan tan Senegal, oo ah waddankeyga oo wax walba i siiyay.
Sharafta waxaa la i siiyay toddobaadkan si ay u doortaan guddiga Abaalmarinta Pyne ee 2021 si aan ugu soo bandhigo dhagaystayaasha guuleystaha shirkadda ugu wanaagsan Afrika inta lagu guda jiro xafladda rasmiga ah oo ay goobjoog ka yihiin Wasiirro iyo Danjirayaal iyo Qurbojoog.
Waxaan fahansanahay ahmiyadda iyo culayska mudnaankan oo loo nisbeeyay shakhsiyaadka waaweyn ee dalxiiska adduunka waxaanan jeclaan lahaa inaan xaqiijiyo taageeradayda anigoo laba jibbaaraya dadaallada tirada iyo tayada ee soo nooleynta dalxiiska Afrika kadib Covid-19
Geesiga Dalxiiska ee Dakar, Senegal
Mr. Deme Mouhamed Faouzou wuxuu kaalin weyn ka qaatay maalgelinta Dalxiiska ee Senegal iyo meelo ka baxsan.
Isagu waa lataliyaha Wasaaradda Dalxiiska iyo Gaadiidka Cirka ee Senegal.
Waxaa lagu yaqaanaa inuu si cabsi la’aan ah u hadlo marka ay timaaddo dalxiiska iyo sida dalxiisku u shaqaynayo.
Wuxuu khabiir ku yahay dalxiiska, soo dhoweynta, iyo waaxda duulista hawada. Waayo -aragnimadiisa xagga ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo maamulka dawladda labadaba waa wax aanan ka helin hoggaamiyeyaal badan
Wuxuu aad u jecel yahay dalxiiska, horumarkiisa wuxuuna leeyahay rabitaan aad u xooggan oo ah inuu u dagaallamo waddamada aan horumarsanayn si ay u helaan maalgashiyada iyada oo loo marayo dalxiiska,
Waa qof ka kooban qiyamka ixtiraamka, wadaagga, wadajirka, iyo mabaadi'da 'furfurnaanta iyo abuurista maalka.
Mr. Faouzou waa xubin ka mid ah Shabakada Dalxiiska Adduunka.
Wuxuu u sheegay eTurboNews:
Mr. Faouou wuxuu yiri:
Waxaan ahay jilaa xirfadle ah oo ka qalin jabiyay dalxiiska, soo dhoweynta, iyo waaxda duulista rayidka, aniga oo leh khibrad dhowr sano ah labadaba qaybta gaarka loo leeyahay iyo maamulka guud
Waxaan aad u jeclahay dalxiiska, waan jeclahay horumarkiisa waxaanan leeyahay rabitaan aad u xoog badan si aan u arko helitaanka waddamada aan horumarsanayn ee soo ifbaxa iyada oo loo marayo dalxiis, taas oo ka kooban qiyamka ixtiraamka, wadaagista, wadajirka, iyo mabaadi'da 'furfurnaanta iyo abuurista maalka .
Waxaan ahay macallin khabiir ku ah Dalxiiska Jaamacadda La -taliyaha Farsamada ee Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Cirka ee Senegal.
Waxaan ahay agaasimaha wakaaladda socdaalka, maareeyaha hoteelka, afhayeenka, tababaraha, Lataliyaha Sare, iyo Madaxweynaha Kormeeraha Qaranka ee Horumarinta Dalxiiska ee Senegal
Waxaan ahay xubin iyo Wakiilka Senegal ee Ururka Xirfadlayaasha Marti-gelinta Afrika (AAHP), Wakiilka Guddiga Dalxiiska Afrika ee Afrika ku hadasha Faransiiska.
Waxaan safiir u ahay Guddiga Dalxiiska Afrika.
Waxa kale oo aan ahay qoraaga dhawr buug, oo ay ku jiraan safarrada dalxiiska ee Senegal iyo tacaburro.
Waxaan u sharraxnaa Xoghayaha Guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka-UNWTO.
Waxaan helay 2017 Knight of the National Order of Merit ee Jamhuuriyadda Senegal.
Mr. Faouzou wuxuu ku jiraa Shirkad. La kulan 16 geesiyaal dalxiis halkan.
Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz ayaa yiri:
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maamuusno Deme Mouhamed si uu u noqdo geesigii ugu horreeyay ee Dalxiiska Galbeedka Afrika. Waxa uu si hagar la’aan ah uga shaqaynayey sidii uu dalkiisa Senegal u siin lahaa aqoonsi dhinaca socdaalka iyo dalxiiska oo maraya dhibaatadan hadda taagan. Waxay u qaadataa dadka aragtidiisa, tamartiisa, iyo saamayntiisa inay hoggaamiyaan. Hambalyo! ”
Isbedelka cimilada ayaa halis ku ah xasiloonida maaliyadeed ee Maraykanka
Diana McIntyre-Pike wuxuu leeyahay,
Ogosto 24, 2021 markay tahay 07:26
Hambalyo Deme Mohamed oo ku soo biirtay Qoyskayaga Abaalmarinta Geesiyaasha Dalxiiska Caalamiga ah ee WTN oo aan sharaf u yeeshay in lagu daro 2020 oo aan rajaynayo inaan dhowaan kula xiriiro